Ligaya ngomunye umhlathi ngokubhalwa kwezivivinyo
Lo mnyango uyalele ukuthi zingabhalwa lezi zivivinyo kulabo abakwi-Intermediate Phase (Grade 4 kuya kuGrade 6) neSenior Phase (Grade 7 kuya kuGrade 9). Isithombe esigciniwe: Oupa Mokoena/African News Agency(ANA)
Mhlengi Shangase | June 7, 2021
NJENGOBA kwezinye izifundazwe sesifikile isivuvu sesithathu seCovid-19, uMnyango weMfundo eyisiSekelo usuyalele izikole ukuthi zingabhalwa izivivinyo zamaphakathi nonyaka kanjalo nezokuphela konyaka kubafundi bakwaGrade 4 kuya kuGrade 9.
Lo mnyango uyalele ukuthi zingabhalwa lezi zivivinyo kulabo abakwi-Intermediate Phase (Grade 4 kuya kuGrade 6) neSenior Phase (Grade 7 kuya kuGrade 9).
Okunalokho lo mnyango uyalele ukuthi kubhalwe izivivinyo (controlled tests) ngezinto ezisuke zifundiwe. Lokhu kuqukethwe yisekhula ekhishwe ngumnyango eyalela izikole ukuthi zisebenzise namamaki onyaka (School Based Assessment), njengoba kwiFoundation Phase (Grade R kuya kuGrade 3), ezokwenza u-100%.
Ngokwale sekhula kwi-Intermediate Phase ne-Senior Phase amamaki onyaka azokwenza u-80%, bese kuthi izivivinyo zenze u-20%.
Le sekhula ithi izivivinyo zikaJuni kumele zakhiwe umsebenzi ofundwe ekoteni yokuqala neyesibili yonyaka, kuthi ezokuphela konyaka zakhiwe umsebenzi wekota yesithathu neyesine yonyaka.
Kwenzeka lokhu nje umnyango usanda kuyalela izikole ukuthi zingazibhalisi izivivinyo zamaphakathi nonyaka kwamatric.
Lokhu uNgqongqoshe womnyango uNkk Angie Motshekga, uthe kwenzelwa ukuthi abafundi babe nesikhathi esenele sokufunda njengoba belahlekelwe yisikhathi sokufunda ngenxa yeCorona.
Uthe abafundi abenza umatric kulo nyaka, ababenza uGrade 11 ngonyaka odlule abazange baziphothule izifundo nyakenye ngenxa yokuthi izikole zavalwa ngenxa yokuqubuka kweCovid-19.
Inhlangano yabafundi iCosas, ithe ayihambisani nokuthi izivivinyo zingabhalwa ngoba iyona ndlela umfundi akwazi ukuzihlola ngayo ukuthi usekuphi nezifundo zakhe.
Ibamba likaMengameli weNatu uMnuz Sibusiso Malinga, lithe njengoba isivuvu sesithathu seCovid-19 sinyonyoba, bayahambisana nokuthi kufundwe kungahlalwa phansi kubhalwe izivivinyo ngoba kuthatha isikhathi futhi kungaze kuvalwe izikole uma lidlanga igciwane.
Uthe bakhathazekile ngoba izivivinyo ziyasiza ekutheni umfundi akwazi ukuzihlola ukuthi ukuphi ezifundweni.
“Njengoba sinyonyoba lesi sivuvu akekho owaziyo ukuthi kuyokwenzakalani uma isimo sidlanga, kungenzeka nezikole zivalwe. Siyahambisana nokungabhalisi izivivinyo kodwa sinokukhathazeka futhi ngoba ziyasiza ekutheni umfundi azihlole.”
INaptosa ithe iyahambisana nokungabhaliswa kwezivivinyo zamaphakathi nonyaka. Le nyunyana ithe akubanga unyaka olula njengoba nabafundi beshintshana uma beya ezikoleni ngoba kusatshelwa ukubhebhetheka kweCovid-19.